သစ်သားပြားများ၊ ပရိဘောဂများ၊ အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းများနှင့်တံခါးဘောင်များနှင့်သင့်တော်သောထောင့်ဖြတ်စက်၊ တွက်ချက်ထောင့်နှင့်အညီ polygonal ဖန်စီပုံစံများနှင့်ပုံစံများကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော worktable အလုပ်ကိုအလွန်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာဘောင်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ၄၅ ဒီဂရီအလွိုင်းမြင်ဓါးတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အသစ်ဖြတ်ထားသောဘောင်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့သောအခါ၎င်းသည်ဘောင်၏ဖြတ်ခြင်းကိုမခြစ်မိပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်ခွဲစိတ်မှုသည်မချောမွေ့ဘဲထောင့်များကိုအလုံပိတ်ထားသောကြောင့်ခွဲစိတ်ရန်ကုတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
ဤပစ္စည်းသည် roller ပစ္စည်းကိုလက်ခံသည်။ GCr15 forging bearing steel, vacuum quenching, secondary finish and polishing; မာကျောမှုသည် hrc58-60၊ hard chromium plating သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်
အိမ်ရှင်ဖွဲ့စည်းပုံ: wallboard အမျိုးအစား၊ ဘောင်သည်စတုရန်းပြွန်ဂဟေတည်ဆောက်ပုံကိုလက်ခံသည်။
အဓိကထုတ်လွှင့်မှုမှာ bevel gear transmission ဖြစ်ပြီး rollers အုပ်စုတစ်ခုစီအကြားကူးစက်မှုသည် bevel gear transmission ဖြစ်သည်
Rolling မြန်နှုန်း: ≤ 0-10m / မိနစ်
လုံခြုံရေးတံခါး / မီးတံခါးဘောင်များဖွဲ့စည်းရန်ဆန့်ရန်သုံးသည်
မော်ဒယ် NCM-45 °
အဓိကရည်ရွယ်ချက် တံခါးဘောင်အတွက် ၄၅ ဒီဂရီထောင့်ချိုးနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြတ်စက်
စုစုပေါင်းအရွယ်အစား ၁၉၅၀ * ၁၁၀၀ * ၁၇၀၀ မီလီမီတာ
1. တြိဂံ gantry
၄၅ ဒီဂရီလွှဲလက်နှစ်ချက်ရှိသော ဦး ခေါင်းသည်အထူတြိဂံပုံခုံးပုံသဏ္န်ကိုလက်ခံသည်၊ တိုးချဲ့ထားသောလက်မောင်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအရွယ်အစားကိုပိုမိုကျယ်စေသည်၊ sawing speed သည်ပိုမြန်သည်၊ တည်နေရာသည်ခိုင်မာပြီးတည်ငြိမ်သည်၊ ၎င်းသည်ရွေ့ရန်မလွယ်ကူပါ။
2. Precision အသံတိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း
တင်သွင်းသောအဆင့်မြင့်အလွှာဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး + ကိုယ်တိုင်တီထွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ဆူညံသံကိုများစွာလျော့နည်းစေသည်၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် burrs နှင့်အစွန်းအထင်းကင်းသည်။
3. Electroplating အလျားလိုက်နေရာချပန်းကန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရာအရည်အသွေးကိုစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ် ယူ၍ အခြားသူများကကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချသည်။ ငါတို့ကအဲဒါကိုပေါ့ပေါ့ဆဆကိုင်တွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းသည်တင်းကျပ်စွာလိုအပ်သည်၊ ပြီးပြည့်စုံရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ခြင်းနှင့်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
4. Anti-scratch ဖိအားပစ္စည်း
သူသည် polyurethane ဖိအားရှိသောပစ္စည်း block ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုံခြုံပြီးခြစ်ရာဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် elastic ဖြစ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းပုံပျက်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ကိုမပျက်စီးစေပါ။
ဘုံပွင့် leveling mac ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ...